Shirkii Madaxda Maamul gobaleedyada & DFS oo Maalintii Labaad Galay – Radio Daljir
Shirkii Madaxda Maamul gobaleedyada & DFS oo Maalintii Labaad Galay
Oktoobar 30, 2017 8:17 b 0
Shirka Madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada dalka ayaa maalintii labaad galay,kaddib markii uu shalay si rasmi ah u furay Madaxweyne Farmaajo.
Shirkan oo maalintii shalay ahaa mid furitaan ah oo ay Madaxda keligood ahaayeen ayaa la filayaa maanta in looga hadlo qodobo dhowr ah oo horyaala,sida ay xaqiijiyeen xubno ku dhow dhow.
Sidoo kale waxaa la lagu wadaa in shirka maanta ay kusoo biiraan xubnaha weheliya Madaxda maamul goboleedyada maadaama shirkii shalay ay banaanka ka joogeen,kaasoo ka dhacay guriga Madaxweynaha halkaasoo ay Madaxdu ku quraacdeen.
Shirka ayaa qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo ,waxaa kamid ah xalinta khilaafaadka ka dhaxeeya Dowladda dhexe iyo Maamul goboleedyada,arrimaha amniga iyo sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Kulan deg deg ah oo kasocda Dekadda Boosaaso & Dowaladda beenisay kordhinta Canshuuraha
Kulan aqooneed loo qabtay ardayda Jaamacadda bariga Afrika ee Buuhoodle (dhegayso)